झुक्किएर पनि मोबाइलमा यी ४ कुरा सेभ नगर्नु : गरे सजिलै हुन्छ लिक, हुनेछ जीवन बर्वाद ! | Liveekhabar, News Portal website, Nepal No.1 News Portal website, Onlince News Portal website
झुक्किएर पनि मोबाइलमा यी ४ कुरा सेभ नगर्नु : गरे सजिलै हुन्छ लिक, हुनेछ जीवन बर्वाद !
हामी पछिल्लो समय पुरै प्रविधियुक्त साधनमा निर्भर भएका छौ । दिमागलाई कति दुख दिन चाहान्नौँ । यसैले हरेक कुरा मोबाईल वा अरु डिभिाईसमा सेभ गर्ने चाहिएको बेला हेर्ने बानी छ । तर सम्भिने झण्झटबाट मुक्त हुन वा पछि खोजेको बेला सजिलै प्राप्त गर्न गरेको यो कार्यले धेरैलाई पछुतो महसुस गराई सकेको छ । यसैले हामी सचेत गराउँदैछौ । मोबाइल फोनमा आफ्ना संवेदनशील सूचना, तस्वीर, लगायतका चिजहरु सेभ गर्ने गर्नुभएको छ भने सावधान । तपाइँले आफ्नो मोबाइलमा कहिल्यैपनि यी चिजहरु सेभ नगर्नुहोस्ः
पासवर्ड आजकल हरकोहीका इन्टरनेटमा विभिन्न अकाउन्ट हुन्छन् । त्यसैले मानिसहरुसँग धेरै भन्दा धेरै इन्टरनेट अकाउन्टका पासवर्ड हुन्छ । धेरै पासवर्ड भएपछि स्मरण गर्न गाह्रो हुने भएकाले धेरैको बानी हुन्छ त्यस्ता पासवर्डलाई मोबाइलमा सेभ गरिराख्ने । त्यो गरेपछि न त पासवर्ड सम्भिmनैपर्ने झण्झट, न त भुलिने डर । तर यसरी पासवर्ड मोबाइलमा सेभ गरेर राख्नु राम्रो हुँदैन । अझ अनलाइन सपिङ साइट तथा अनलाइन बैक अकाउन्टको पासवर्ड भुलेर पनि मोबाइलमा सेभ नगर्नुहोस् । मोबाइल चोरी भएको वा अरु कसैको हातमा परेको स्थितिमा अर्को व्यक्तिले तपाइँको पासवर्ड दुरुपयोग गर्न सक्दछ ।
Newer Postगरैकानुनी विदेशी कामदारको दर्ता गर्न मलेसियाका मन्त्रीको आग्रह
Older Postअमिताभ बच्चनलाई आफ्नै हजुरबुवा ठान्छन् शाहरुख खानका छोरा अबराम